Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Chelsea Oo Dalab Dhaqso Ah Ka Gudbineysa Haaland, Ronaldo Oo Doonaya Ku Biirista PSG Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga: Chelsea oo dalab dhaqso ah ka gudbineysa Haaland, Ronaldo oo doonaya ku biirista PSG iyo Qodobo kale
July 11, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay isku dayi karto inay lasoo saxiixatociyaaryahanka khadka dhexe ee Marseille Boubacar Kamara inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan. Sida laga soo xigtay football.london
Manchester United ayaa isha ku heysa inay 17 milyan oo ginni kula soo wareegto daafaca midig ee reer Italy iyo kooxda Napoli Giovanni di Lorenzo ka dib finalka Koobka Qaramada Yurub ee Axada ay la ciyaarayaan England. (thesun)
Weeraryahanka Juventus Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu doorbidayo u dhaqaaqista Paris Saint-Germain halkii uu ku laaban lahaa Manchester United xagaagan. Sida laga soo xigtay FootMercato
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa doonaya in madaxda kooxdu ay “dhaqsi” ugu dhaqaaqaan saxiixa weeraryahanka reer Norway Erling Braut Haaland oo ka socda Borussia Dortmund, laakiin kooxda Jarmalka ayaa qorsheyneysa inay weli ku heysato Westfalenstadion xilli ciyaareedka soo socda madaama ay dalbanayaan 175m euros (£ 150m). 20 jirkaan xagaagan. (Bild)
Manchester United ayaan ka shaqeyneyn heshiis isdhaafsi ah si ay u keenaan weeraryahanka England Harry Kane, oo 27 sano jir ah, Old Trafford oo ay kala soo wareegaan Tottenham. (Express)
Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa ka fiirsanaya heshiis isdhaafsi ah oo ay ku lug leeyihiin weeraryahankii hore ee reer France Antoine Griezmann oo 30 jir ah iyo qadka dhexe ee reer Spain Saul Niguez oo 26 jir ah. (Dailmail)
Chelsea ayaa xiriir la sameysay Rennes si ay ugu dhaqaaqdo 18 jirka qadka dhexe ee reer France Eduardo Camavinga, kaasoo sidoo kale ay raadinayaan kooxaha Manchester United, Arsenal iyo Real Madrid laakiin waxaa la sheegayaa inuu doorbidayo inuu sii joogo France si uu ugu biiro Paris St-Germain. (thesun)
Tababaraha Everton Rafael Benitez ayaa isha ku haya inuu qorto daafac midig, iyadoo Toffees ay raadinayaan ciyaaryahanada da’doodu ka hooseyso 21 jirka sida Norwich City Max Aarons, iyo ninka reer Holland Denzel Dumfries, 25, oo ka socda PSV Eindhoven. (90mins)
Benitez ayaa ku laaban kara kooxdiisii ​​hore ee Newcastle United isagoo isku dayaya inuu la soo wareego ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer France Allan Saint-Maximin, oo 24 jir ah, hadii weeraryahanka reer Brazil Richarlison, 24, uu ka tago Everton. (Sunday Mirror)
Arsenal ayaa dhameystirtay saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Belgium Albert Sambi Lokonga oo ay kala soo wareegeen kooxda Anderlecht heshiis ku kacaya .14.9m oo lagu daray lacag dheeri ah. Tallaabadan ayaa lagu dhawaaqi doonaa ka dib markii 21 jirku uu dhammaystiray muddo karantiil ah. (Mail on Sunday)
Tottenham ayaa ku adkaan doonta inay lasoo saxiixato daafaca reer France Jules Kounde oo ka socda Sevilla , iyadoo Spurs ay diyaar la tahay inay bixiso 51 milyan ginni 22 jirkaan kaasoo ka badan wixii ay kooxda reer Spain qarash gareyn karto. (Ciyaaraha)
Chelsea ayaa sidoo kale sheegtay inay xiiseyneyso Kounde waxaana laga yaabaa inay isku dayaan inay afduubaan dadaallada Spurs ee ku aadan saxiixiisa xagaaga. (thesun)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Spain Dani Ceballos, oo 24 jir ah, ayaan weli meesha ka saarin inuu ka ciyaarayo Premier League ka dib labo xilli ciyaareed oo uu amaah kula joogay Arsenal, laakiin waxaa ka go’an inuu ku biiro kooxda Real Madrid isagoo ku laabtay kooxdiisii ​​ (Goal)
Tababarihii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane, oo 49 jir ah, ayaa diidi doona dalabyada ku soo laabashada maamulka kooxda taas bedelkeedana wuxuu qaban doonaa hal maalin oo suuragal ah inuu ku guuleysto tababaraha Faransiiska. (L’Equipe)
dhameestirka weeraryahankii reer France Olivier Giroud ee uga soo dhaqaaqay Chelsea kuna biiray AC Milan ayaa soo dhow, iyadoo 34 jirkaan uu ogolaaday heshiis labo sano ah oo uu kula joogayo kooxda reer Talyaani. (Le Parisien)
Karim Benzema, oo 33 jir ah, ayaa kusii nagaan doona Real Madrid xitaa hadii kooxda reer Spain ay ku guuleysato inay lasoo saxiixato saaxiibkiis reer France Kylian Mbappe, oo 22 jir ah xagaagan Paris St-Germain . (Marca)
Kooxda heysata horyaalnimada Talyaaniga ee Inter Milan ayaa ku guuleysatay loolanka loogu jiro saxiixa laacibka aadka loo qiimeeyo ee Shamrock Rovers oo ka tirsan xulka Under-16 ee Republic of Ireland Kevin Zefi, oo 16 jir ah, kaasoo ay sidoo kale doonayeen kooxo badan oo ka dhisan Premier League, iyo sidoo kale kooxo ka dhisan Jarmalka iyo Netherlands. (Sun Axada)
Barcelona ayaa ogolaatay heshiis ay ku iibineyso 23 jirka qadka dhexe ee reer Spain Carles Alena kooxda Getafe iyadoo kooxda reer Catalonia ay wado dadaalkeeda qarash dhimista si ay u hubiso inay ku hesho weeraryahanka reer Argentina Lionel Messi, 34, inuu qandaraas cusub u saxiixo. (Goal)
Dadaalkii Arsenal ee ay ku dooneysay inay kula soo saxiixato goolhayaha Ajax Andre Onana, oo 25 jir ah, ayaa jug soo gaadhay iyadoo ciyaaryahanka reer Cameroon la sheegay inuu doorbidayo u dhaqaaqista kooxda Faransiiska ee Lyon halkii uu ka dhaqaaqi lahaa kooxda Premier League. (Football.london)
Tottenham ayaa kalsooni ku qabta inay iska iibin karto 23 jirka daafaca ah ee Cameron Carter-Vickers, inkastoo ay laba jibaareen qiimaha ay ku doonayaan oo ah £ 5m. Labada Newcastle United iyo Celtic labaduba waxay xiiseynayaan ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Mareykanka. (footballinsider247)